လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှောက်ယှက်ခြင်း Resistance လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို, လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှောက်ယှက်ခြင်း Resistance လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှောက်ယှက်ခြင်း Resistance Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Tag ကို
လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှောက်ယှက်ခြင်း Resistance လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို
Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှောက်ယှက်ခြင်း Resistance လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို, လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှောက်ယှက်ခြင်း Resistance လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှောက်ယှက်ခြင်း Resistance Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Tag ကို
configuration လှိုင်းနှုန်းသည် UHF access ကိုကဒ်စာဖတ်သူကို, Wiegand 34 output ကို.
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ: 902~ 928MHz
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF chip ကို: Impinj Monza R6
ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော: EPC ကို Class-1 Gen2, IEC / က ISO 18000-6C
sensitivity ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးခြင်း: -12dBm (5 သန်းနဲ့သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ရည်ညွှန်းအကွာအဝေး)
chip မှတ်ဉာဏ်: အဘယ်သူမျှမ
TIME က: 96-bits
access ကို Code ကို: အဘယ်သူမျှမ
ဒေတာကို retention ကိုအချိန်: 10 နှစ်ပေါင်း
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစား: 98မီလီမီတာ x ကို 56mm x ကို 5mm
Operating အပူချိန်: -40℃ ~ + 85 ℃
အသုံးပြုခံ့: သိုင်းကြိုး, ဆွဲထားလည်ပင်း
လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှောက်ယှက်ခြင်း Resistance လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးကတ်တစ် tag ကိုဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံဒီဇိုင်းအဘို့အဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, Anti-လူ့်ရောက်စွက်ဖက်ဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်၎င်း tag, စာဖတ်သူကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လူ့်ရောက်စွက်ဖက်စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းအားဖြင့်သာမန်အဖြူကဒ်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းလွဲချော်, အဆိုပါ tag ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲလူ့ခန္ဓာကိုယ်မှအနီးကပ်နိုင်ပါတယ်, စနစ်တစ်ခုလုံးအတွက်ထိထိရောက်ရောက်ကောင်းတစ်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်စနစ် run နိုင်ရန်အတွက်တူညီတဲ့ tag ကို performance ကိုအာမခံနိုင်, အလွယ်တကူကျောင်းများအတွက်သုံးနိုင်တယ်, ဆေးရုံများ, နေရာများ, စက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များစီမံခန့်ခွဲမှုပတ်ဝန်းကျင်.
လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းများအပေါ်အခြေခံပြီး custom ပွဲ.
ပရဝုတ်, စက်ရုံတွေ, ဆေးရုံများ, နေရာများ, လက်မှတ်တွေ, ဖျော်ဖြေပွဲ, ကလပ်, ကွင်းန်ထမ်းများစီမံခန့်ခွဲမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှောက်ယှက်ခြင်း Resistance လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်
နောက်တစ်ခု: ထောက်ပံ့ရေး TK4001 Chip န့်ကို, TK4001 Chip COB
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် (24)